Famadihana palitao Hirongatra ato ho ato…
Rajaonarisoa Maholy “Mahatoky ny vadiko hampandroso an’Antananarivo aho”
Manana anjara toerana lehibe eo amin’ny fiainana mpitantana, mpanao politika, tompon’andraikitra ambony, manampahefana ny vady andefimandriny.
Fandikan-dalàna amin’ny propagandy Jamba ,moana , marenina ny CENI
Ny lalàna fehizoro 2018-008 tamin’ ny 11 mey 2018 sy ny tovana amin’ izany no mamaritra ny lalàna mifehy ny fitantanana ankapobeany ny fifidianana ben’ ny tanàna sy mpanolontsaina.
Arlette Ramaroson “Tsy manana porofo hitazonana ireo nosy Eparsa i Frantsa”
Rehefa nohalalinina sy nodinihina ary nofakafakaina dia voaporofo fa tsy manana porofo hitazonana ireo nosy Eparsa ireo ny firenena Frantsay, hoy i Arlette Ramaroson, mpahay lalàna iraisam-pirenena, ka tokony hanararaotra hitaky ny hamerenana izany isika malagasy.
Leo krizy ny vahoaka Misesy ny fandorana biraom-panjakana
Nodoran’ny andian’olona ka kila forehitra ny Kaomisarian’ny polisy ao Sainte Marie.
Kandida Jimmy Randriantsoa « Aoka tsy hifampihantsy ! »
Manohy ny fampielezankeviny toy ny kandida ho ben’ny tanàna namana hafa rehetra ny laharana faha-7 ao anaty bileta tokana
Elias Ralaiarimanana « Havitrika ny mpifidy amin’ity ! »
Lesoka eto amin’ny tany sy ny firenena ny tsy fampiharana lalàna, hoy ny kandida ho ben’ny tanàna eto Antananarivo, Elias Ralaiarimanana.
Fanatanterahana fifidianana Nanolotra 216 000 dolara ny Norvezianina
Naneho ofisialy ny tosikara ara-pifidianana andiany fahadimy ho an’ny kitapom-bola SACEM (Soutien Au Cycle Electoral de Madagascar)
Mba hanao ahoana ny tontolo politika eto amintsika fa dia manao ny tsy fanao sahady ireo mpanao politika ? Vita iny ny fianianana, hametraka ireo olona hiara-kiasa aminy ny filoham-pirenena ary ireo tompon’andraikitra ao amin`ny fiadidiana ny repoblika no hosoloina voalohany.
Hosoloina amin`izany ny sekretera jeneralin`ny fiadidiana ny Repoblika, ny tale misahana ny fiarovana ny filoha, ny tale misahana ny arofenitra ary ny tale kabinetra. Hiitatra any amin`ny minisitera samihafa ahitana ny toerana politika sy stratejika rehetra hahafahany manataneraka ireo programany. Fantatra aloha fa ny lehiben`ny faritra aloha izao no efa nivoaka fa hovana hatramin`ny anarany ka ho lasa governora rezionaly. Hirongatra, araka izany, ny fivadihana palitao eo amin`ny mpanao politika mba hahazo tombontsoa manokana. Amin`ny ankapobeny, tsy ilay filoham-pirenena loatra no tena ratsy fa ny nataon`ireo manodidina azy no manaratsy endrika azy.